Ny menaka esansiela dia vovo-javamaniry nalaina avy tamin'ny voninkazo voajanahary, ravina, peel, voa, sampana ary faritra hafa, ary molekiola manitra an'ny zavamaniry. Ny toetra mampiavaka ny zavamaniry madio dia voatahiry nefa tsy nasiana fitambarana artifisialy. Misy vokany miavaka amin'ny hoditra, vatana ary fanahy izany. Ny molekiola ...
Ny niandohany sy ny tantaran'ny menaka tena ilaina
Sina dia tena sivilizasiôna taloha izay nampiasa zavamaniry manitra voalohany hitazomana ny fahasalamana. Ny zavamaniry dia nampiasaina tamin'ny andro taloha, nampiasa toetra mampiavaka ny zavamaniry hitsaboana aretina, ary handoro ditin-kazo manitra mba hampiorina ny firindrana sy ny fifandanjana ara-batana sy ara-tsaina. . Ny majika natiora dia nanome antsika conti ...
Fampirantiana fifanakalozana varotra Mey 2014
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-09-20
Anaran'ny fampisehoana varotra: API faha-72 China Daty nanatrehana: 2014 .5 Firenena / Faritra: CN Fampidirana: API China dia miaraka amin'i P-MEC, ICSE, LABWorld, InnoPack, BioPh ary manasongadina faritra ho an'ny Natural Extracts sy EP CLean Tech. Niorina tamin'ny 2006 izahay ary manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana natura ...
Fampirantiana ny fifanakalozana varotra Jona 2014
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-09-19
Anaran'ny fampisehoana varotra: 14th CPHIchina Daty nanatrehana: 2014 .6 Firenena / Faritra: CN Fampidirana: Ny CPhI Shina dia miara-miasa amin'i P-MEC, ICSE, LABWorld, InnoPack, BioPh ary manasongadina faritra ho an'ny Extract voajanahary sy EP CLean Tech. Niorina tamin'ny 2006 izahay ary manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana natur ...